Nzira yekufambisa sei imba yenhau? Nyaya yaJanayugom | Linux Vakapindwa muropa
Pepanhau reHindu rinofunga kushandisa Scribus pachinzvimbo chepropetiary software.
Nzira yekufambisa sei imba yemashoko kune software yemahara? Mapepa diaries anozivikanwa kunge ari kutevera nzira yema dinosaurs. Kune rimwe divi, mutengo wekugadzira uri kuramba uchidhura uye akasarudzika marezinesi esoftware anofanirwa kubhadharirwa pasi pechirango chekutongwa nematare.
Janayugom iri diary repepa iro Iyo inoburitswa mumutauro wechiMalay uyen dunhu reHindu reKerala. Iine vashandi vanopfuura zana (mumwe nemumwe aine komputa yake) yakagoverwa mumahofisi gumi nemana uye siwe kutenderera kunenge mazana zana emakopi (inofungidzirwa nhamba yevanyoreri).
1 Dambudziko raJanayugom
2 Nzira yekufambisa sei imba yenhau?
2.1 Kutsunga kwesoftware yekushandisa
2.2 Kudzidziswa kwevashandi
Ndiri kutevera nyaya kubva yenyaya yemumwe wevatori vechikamu muboka rezano rekutama. Munhu uyu ane pfungwa dzakasimba dzezvematongerwo enyika, kusanganisira mamwe kuhurumende iripo yeIndia uye nemidziyo software (inopesana). Dzivisa kutaura zvimwe zvezvinetso zvepepanhau senge shanduko mune zvido zvevaverengi, Uye sezvo ini ndisingataure chiMalay, handigone kutonga kuti pepanhau rinorasikirwa nevaverengi nekuti rakaipa.
Asi kusiya zvese izvo, uye kumwe kukunda mukutonga kwangu nguva isati yakwana, nyaya yacho inonakidza.
Ita iyo nguva, Janayugom akashandisa Adobe PageMaker kune zvese zvine chekuita nemamiriro uye kugadzirwa. Adobe akarega PageMaker muna 2001. Kushaikwa kwekuvandudza iyo inodikanwa kuti ushandise ASCII hunhu hwekodhi yekodhi. Pavakasarudza izvozvo yaida kukwidziridzwa kune zvirinani software iine zvimwe zvakawanda zvakakosha maficha, kusanganisira Unicode rutsigiro, sarudzo ine musoro yaitaridzika kunge chimwe chigadzirwa kubva kune mumwe mugadziri; AdobeInDesign.
Adobe InDesign inowanikwa pasi pekunyorera modhi. Tiri kutaura nezve angangoita zana emakomputa (kunyangwe angave ari mashoma, kwedu sosi hakujekese kuti vangani vavo vashandi vehutungamiriri) Uye, kunyangwe munyori asingazvitaure, ndinofungidzira izvozvo vatori vemifananidzo vaizodawo kushandisa Photoshop, Illustrator, uye Lightroom.
Nzira yekufambisa sei imba yenhau?
Maitiro ekutama akakamurwa kuita zvikamu zviviri:
Kutsunga kwesoftware yekushandisa.
Kutsunga kwesoftware yekushandisa
Zvinangwa padanho iri reprojekti zvaive zviviri; Kutanga kushandisa Unicode sehunhu encoding standard uye usabhadhara software yakashandiswa.
Kuti agone kutanga, nyanzvi yakabvunzwa kugadzira mafonti eMalay mutauro. Imwe yadzo yatowanikwa pasi peyakavhurika rezinesi.
Panyaya yesoftware, isu takasarudza shandisa yako wega Linux kugovera izvo zvinosanganisira zvinotevera zvirongwa; Scribus, Gimp, Inkscape uye LibreOffice, pamwe neyakagadziriswa ASCII kune Unicode inoshandura inonzi Janayugom Hora.
Kugovera kweLinux kunoshandiswa kunonzi Janayugom GNU / Linux. Izvi Kubuntu-kwakavakirwa nekuti Ubuntu yakawanikwa inosanganisira irinani rutsigiro rwehardware, ine yakazara yakazara zvinyorwa, uye KDE inoshanda zvakanyanya zviwanikwa kupfuura GNOME uye nyore kudzidza kune avo vanobva kuWindows.
Janayugom GNU / Linux inosanganisira zvirongwa zvinotevera:
Scribus: Desktop kushambadzira kusika uye dhizaini seimwe nzira yeAdobe InDesign.
Gimp: Kugadzirisa mapikicha edhijitari seimwe nzira yeAdobe Photoshop.
Inkscape: Kugadzirisa vector mifananidzo seimwe nzira yeAdobe Illustrator.
LibreOffice: Hofisi suite seimwe nzira yeMicrosoft Office.
Janayugom Hora: Zvichienderana neFreaknz-qt, iri ASCII kune Unicode inoshandura iyo zvakare inobvumidza iwe kunyora nekuchengetedza nhau mune yakajeka mavara.
Kuiswa kwesoftware yakaitwa muzvikamu zviviri; kutanga yakaiswa pane iwo makomputa anodikanwa ekudzidziswa. Mushure mokunge zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvevashandi vadzidziswa, vakagara mune vamwe vese. Yakagadzirwawo kutamira kuLinux kubva kune yakagovaniswa faira server.
Janayugom akadenhwa kuti adzidzise vashandi vanopfuura zana uye vanoisa iyo software nyowani panhamba yakafanana yemakomputa akapararira pamahofisi gumi nemana Kerala yose. Panguva imwecheteyo vaifanira kuenderera mberi nemabasa avo ezuva nezuva. Chikwata chakatarisira chakasarudza kosi yemazuva mashanu uye chakakamura vashandi mumapoka matatu.
Mazuva mashanu akapatsanurwa seinotevera:
Zuva re dzidza iko kushandiswa kwekutanga kweiyo inoshanda sisitimu uye tanga kunzwisisa iyo yose software stack uye kufamba kwebasa,
Rimwe zuva reiyo kudzidziswa-zvine chekuita nemifananidzo, kusanganisira GIMP uye Inkscape.
Mazuva matatu akakumikidzwa ku kudzidziswa mukushandisa kweSribus.
Chikamu chakakosha chakatariswa mune vatevedzeri uye zvigadzirwa zvemifananidzo, kuvakurudzira kuti vashandise rezinesi reCreative Commons uye kuti vabatsire paWikimedia Commons.
Zvakare zvakapihwa yakasarudzika masisitimu manejimendi manejimendi kudzidziswa GNU / Linux kune maviri Janayugom sysadmins.
Hardware kuenderana, kunze kwekunge mune mamwe emamodeli ekudhinda zvaisada kupindira kwekuwedzera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Nzira yekufambisa sei imba yenhau? Nyaya yepepanhau reHindu
Iyo inonakidza nzira yekutama, muenzaniso wakanaka wezvingaitwe nesoftware yemahara, iwe unongofanirwa kuve nesarudzo yakasimba yekutora matanho anodiwa kuti zvinhu zvifambe. Chakanakisa chinyorwa, kwaziso compadre.
Inonakidza kwazvo. Haisi nhanho iri nyore asi zvinogoneka. Kuzvizarurira kune izvo zvichave zvakakosha mune ramangwana.
Zvakanaka. Muenzaniso wakajeka wekuti kana Linux ikasabudirira pa desktop, imhaka yekuti haina kupihwa mukana. Pano zvakasimbiswa, zvakare zvakare, kuti mamwe maturusi aripo uye anoshandira zvakafanana chinangwa.
Nemakushi maviri ...!